कसले गर्दैछ आईजीपी सर्वेन्द्र खनालमाथि प्रायोजित प्रहार ? – मुलधार न्युज
Home > प्रशासन > कसले गर्दैछ आईजीपी सर्वेन्द्र खनालमाथि प्रायोजित प्रहार ?
कसले गर्दैछ आईजीपी सर्वेन्द्र खनालमाथि प्रायोजित प्रहार ?
१७ भाद्र २०७५, आईतवार ११:२१
काठमाडौ- पछिल्लो समय प्रहरी संगठनमाथि विभिन्न पक्षबाट प्रायोजित आक्रमण शुरू भएको छ । प्रहरीले काम गर्दै गरेको घटनाका विषयलाई लिएर यस्ता आरोप तथा षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्न थालेको पाइएको हो।
नेपाल प्रहरीका प्रमुख आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले भनेका छन्, ‘मुलुकमा अपराध न्यूनीकरण भइरहेको छ । आपराधिक क्रियाकलापमा नियन्त्रण भइरहेको छ ।’ तर एकथरीले बलात्कारको मुद्दालाई लिएर खनालको कामलाई प्रभावित पार्ने प्रायोजित प्रोपोगान्डा गर्न थालेका छन् । निर्मला पन्त प्रकरणदेखि विभिन्न ठाउँमा भएका बलात्कारका विषयमा खनालविरुद्ध कालाबजारीया, तस्कर र संगठनमा उनका विरोधीहरू प्रायोजित रूपमा नै लागेका हुन् ।
‘बलात्कार’ अपराधभित्रको सम्भावित घटना हुने भएकाले प्रहरीले यसको पूर्वयोजना थाहा पाउन सक्तैन । सामाजिक अपराध भएका कारणले घटनापछि नै प्रहरीले कारबाहीका प्रक्रियालाई बलियो बनाउँदै लैजाने गरेको छ । कञ्चनपुरमा निर्मला पन्त प्रकरणमा त्यहाँका प्रहरीविरुद्ध नै आन्दोलन भएपछि आईजी खनालले त्यहाँका एसपीलाई नै निलम्बन गरी अनुसन्धानको बाटो खुला गरिसकेका छन् ।
घटना न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले प्रयास जारी राखेको हुन्छ । तर बलात्कारजस्ता घटना विश्वका प्रायः देशमा न्यूनीकरण हुन सकेका छैनन् । बरु, त्यसको ग्राफ बढेको देखिन्छ । बलात्कार बढ्नुको मुख्य कारण भनेको चेतना र सुविधाको अभाव पनि हुन्छ । यसमा खनालको कार्यक्षमतालाई प्रश्न उठाउने नियोजित प्रत्याक्रमण भएको बुझिन्छ ।
तस्करी, गुन्डागर्दीमा संलग्नहरूले सिस्टममा प्रहार गर्दा आइजी खनालविरुद्ध सफलता हात पार्न नसकेपछि मिडिया, सामाजिक सञ्जालमा बलात्कारलगायतका सम्भावित घटनालाई उचालेर आक्रमण गराइरहेका छन् । तस्कर, सिन्डिकेटवालाका लागि खनालले प्रहरी कठोर बनाएका कारण अनेक हिसाबबाट प्रत्याक्रमण गराउने प्रयास भइरहेको छ । उच्च स्रोतले भन्यो, ‘जब सुरक्षा बलियो हुँदै जान्छ, तस्करहरूले सल्बलाउने ठाउँ पाउँदैनन् अनि उनीहरू छापामार प्रत्याक्रमणमा सक्रिय हुन्छन् । त्यो भनेको मिडिया र राजनीतिक दलका नेतालाई प्रायोजित आक्रमण गर्न लगाउने ।’
प्रहरी संगठनभित्र रहेको एक किसिमको राजनीतिक प्रतिशोध लिने तत्वले पनि आईजी खनालविरुद्ध अफवाह फैलनेगरी सहयोग गरिरहेको उच्च स्रोतको दाबी छ । संगठनात्मक संरचनालाई मजबुद बनाउँदै अपराध न्यूनीकरण गरिरहेको अवस्था हुने प्रहारका पछाडि अपराध कर्ममा संलग्नहरूको झुन्ड सक्रिय हुन थालेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको निर्देशनबमोजिम काम गरिरहेका खनालको ब्रिफिङलाई पनि अतिरञ्जित हिसाबले प्रचार गरिएको छ । गृहमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘देशमा सबै अपराध न्यूनीकरणमा जाँदा बलात्कार कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह भएको थियो, त्यसको हल्लाचाहिँ अर्कै गरियो ।’
इन्काउन्टरका विषयमा पनि खनाललाई विवादमा तान्ने प्रयास गरिएको थियो । तर कुमार घैंटे इन्काउन्टर स्याब्बासी पाएका खनालले अपराध न्यूनीकरणमा प्रहरीमाथि जाइलाग्नेलाई गोली ठोक्नु गलत नहुने त्यसबेलै बताएका थिए । पछिल्लो समय भक्तपुरमा बालक निशान खड्काको अपहरण गरी हत्या गर्ने दुईजनाले प्रहरीमाथि नै आक्रमण गर्दा भएको फायरिङलाई पनि गलत ढंगले प्रचारबाजी गर्न एउटा समूह नै सक्रिय रहेको थियो । तर, गृहमन्त्री थापाले त्यो इन्काउन्टर सही भएको दाबी गरिदिएपछि विरोधीहरूको मुख टालिएको थियो । सुशासन न्युज साप्ताहिकमा समाचार छ।
त्यसो त सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीसँगको समन्वयमा नै काम गरिरहेका खनाललाई सरकारबाट भने पूर्ण सहयोग रहेको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि प्रभावित रहेको बताइएको छ । ‘प्रहरी संगठनले प्रभावकारी काम गरेको छ, काम गर्दा अलिअलि आलोचना भइरहेको हुन्छ । आईजी खनाललाई काम गर्ने अख्तियारी सरकारले दिएको हो’, प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री उहाँको सुरक्षाको शैली र योजनासँग प्रभावित हुनुहुन्छ ।’
३६ लाखसहित कुलेश्वरबाट दुई भारतीय पक्राउ
शान्ति सुरक्षामा सहयोग गर्न पूर्व प्रहरीलाई आइजिपी खनालको आग्रह
भारतीय दूताबास अगाडि नेविसंघको प्रदर्शन, प्रहरीद्धारा हस्तक्षेप
निर्मला हत्या प्रकरणः सीआईबीको दोस्रो टोली कञ्चनपुरमा
मन्त्रिपरिषद् बैठक शुरु, सिंगापुरबाट प्रधानमन्त्रीको भिडियो कन्फेरेन्स
बाबुराम र बिप्लपका कार्यकर्ता माओबादी केन्द्रमा प्रबेश
२४ घण्टा ठमेल सञ्चालन गर्न ठमेल व्यवसायीहरुले सडक कालोपत्रे गरेर व्यवस्थित बनाइँदै
नेपाली सेनाका यमबहादुर ब्रिगेडियर जनरलमा बढुवा
नेपाली सेनाद्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन
प्रहरीले फेला पार्यो ठूलो परिमाणमा विष्फोटक पदार्थ